घरनिकाला गरिएकी भनिएकी प्रकाश पत्नी सिर्जनाले खोलिन मुख, हेर्नुहोस् प्रचण्डबारे के भनिन् ? — Imandarmedia.com
घरनिकाला गरिएकी भनिएकी प्रकाश पत्नी सिर्जनाले खोलिन मुख, हेर्नुहोस् प्रचण्डबारे के भनिन् ?
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका पुत्र प्रकाश दाहालको असामयिक निधनपछि लाजिम्पाट फर्केकी प्रकाश पत्नी सिर्जना त्रिपाठी चुनावी काममा जुटेकी छन् । पार्टी अध्यक्ष एवं ससुरा प्रचण्डको सल्लाह अनुसार परिवारका अन्य सदस्यजस्तै प्रकाश पत्नी सिर्जनापनि पार्टी काममा जुटेकी हुन् ।
पार्टी कामका लागि लाजिम्पाट छाडेर सिर्जना पोखरा गएपछि उनलाई घरबाट बाहिर पठाइएको गलत समाचार बाहिर आएको थियो । उक्त समाचारपछि थप मर्माहत बनेकी प्रकाश पत्नी सिर्जनाले छोरा प्रसिद्धलाई ससुरा प्रचण्डसँगै छाडेर आफू चुनावी काममा पोखरा गएको बताएकी हुन् ।
‘हामी सवै शोकको घडीमा छौँ । यति हुँदाहुँदै पनि अध्यक्षले चुनावसम्म परिवारका सवै सदस्य पार्टी काममा फर्कन आग्रह गर्नुभयो । त्यसै अनुसार उहाँ आफै चितवन जानुभयो । छोरी र ज्वाईँहरु पनि चुनावी काममा खट्नु भयो । हामी बुहारी पनि आ—आफ्नो क्षेत्रमा चुनावी कामा जुटन आयौँ’ प्रकाश पत्नी सिर्जनाले भनिन्, ‘हामी राजनीतिक परिवारका सदस्य हौँ । परिवारमा शोकमा परेका बेला पनि देश, जनता र पार्टीप्रति आफ्ना भूमिका पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैका लागि म अध्यक्षसँगको सल्लाह अनुसार पोखरा आएकी हुँ । अरु बाहिर आएका सवै कुरा गलत हुन् । यस्तो शोकको घडीमा यस्ता गलत कुराको मिडियाबाजी नगर्न म सवै संचारकर्मीसँग आग्रह गर्दछु ।’
सिर्जनाले पारिवारिक समस्या भन्दा शोक ठूलो भएको भन्दै यस्तो बेला कसैले पनि पारिवारिक समस्या अगाडि सार्न नहुने बताइन् । सिर्जनाले भनिन्, ‘शोकबाट परिवार उठेपछि पारिवारिक समस्या हल हुन्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ । यसका लागि अध्यक्ष प्रचण्ड, सासु सीता, दिदी रेणुसहित अन्य सदस्यले आआफ्नो भूमिका पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।’
(यो समाचार इमान्दार मिडियाका लागि रातोपाटी डटकमबाट साभार गरिएकाे हाे ।)